Ubugcisa besilingo kwakunjalo ngamaxesha onke enyaniso kunye neengcamango. Khumbula kuphela - geisha, i-courtesans, ikhusela. Bayifuna ukuqhutywa kobugcisa obunzima obugqithisileyo, ngokugqitywa kokunciphisa ukulingana phakathi kokukhwabanisa ngokwesondo kunye nokuhlambalaza, ubuqili kunye nobuqili, akuyiyo inhlamba, kodwa ayikho nje ukukhululwa, kukho into phakathi kwentlungu nobuthathaka.
Ubuhle bobuhle obungaphandle abukwanele ukudukisa umntu, kubalulekile ukuba nobuhle ngaphakathi, kungakhathaliseki ukuba kubonakala kunjani. Kodwa kukhangeleka okukhangela kubantu. Isilingo asikho into ekhohlisa, kunzima kakhulu. Ungayenza njani ukuze afune ukukufezekisa, waphupha kwaye wacinga wena kuphela? Isayithi lethu liza kunika iingcebiso malunga nendlela yokudukisa umntu.
Ungalokothi ukhohlwe ukujonga umbala wakho kunye nawe
Ukulungiswa kakuhle kuphela, ukuvumba okonwabileyo kunye nabesifazane abagqokileyo abanokuthi banokubhenela abantu. Ukuba unqumle ukudukisa umntu - qaphela yonke into encinane yobume bakho, yonke into ibalulekile. Ubungqina - ungasetyenziswanga ukuphuma endlwini ngaphandle kokuhlaziya ubuso bakho ngokugqithiseleyo okanye ngaphandle kokunika ingqalelo emehlweni akho. Akukho imfuneko yokusebenzisa ipele yonke yemibala yabo, kodwa i-even even color does not scare anyone. Khangela izandla zakho kwaye ujonge ukunyuka komzimba - uyazi ukuba izandla zingatsho ngokubanzi malunga nomfazi. Gqoka isitayela, ungagqithiseli iingubo zakho kunye nezixhobo, ukhethe ngokucophelela zonke iinkcukacha kumfanekiso wakho. Musa ukulibala malunga nemaski ebusweni, iinwele kunye nokususwa kweenwele - ezi nkqubo kufuneka zihlale zifana, njengokutshiza amazinyo akho. Ukusebenzisa umgubo ococekileyo kulungile kwaye kuninzi. Musa ukulibala ukuba i-perfume ifanele ilinganise ubunjani bakho kwaye inike ingqiqo. Jonga izihlangu zakho kunye neengubo-kufuneka zibe ziimeko ezigqibeleleyo. Gcina umva wakho ngqo, nangona ekupheleni kokuhlwa uziva ngathi konke ukukhathala kuhleli emhlane wakho. Akukho nto imnandi emehlweni kwintombazana egobileyo.
Ukuba yintlonelo yindlela efanelekileyo yokunyenga umntu
Yiba nesibindi - vula inxalenye yomzimba wakho. Akukho konke okuyimfuneko ukuzichaza ngokucacileyo ngokwakho, kodwa ngaphakathi kwesikhokelo sengqiqo nakwindawo elungileyo, ngexesha elifanelekileyo aliyi kulimaza. Izambatho ezimfutshane kunye ne-neckline encinci ayiyi kuyenza ixhomekeke kunokuba uyifaka umkhonto wepensele ukuya emadolweni nge-neckline ephezulu okanye i-blouse phantsi kwentamo yakho, kodwa uhlawula amahlombe akho. Ukubamba ingqwalasela kwiinkcukacha zesondo ezifunayo, yenza isenzo esingabonakaliyo xa umntu okhweleyo ekhangele kuwe: wabeka unyawo lwakho emlenzeni wakho, kwaye uvumele isandla sakho sihlale esikhwameni sakho. Ukubukeka kwendoda kuya kulandela isandla sakho, kwaye ukubeka ingqalelo kwengubo efihliweyo yengubo, kuya kuqwalasela umzekelo weentsimbi ezingaphantsi kweengubo okanye iisitokisi. Emva koko, umntu uya kuhlala ephupha malunga nawe, kwaye ukucinga ngenye indlela eyona ndlela iphumelelayo yokunyenga umntu.
Kodwa ubulili bakho buya kugxininiswa kungekuphela nje ukukwazi ukugqoka kakuhle, kodwa kunye nezinye iinkcukacha: ukuziphatha, ukuziphatha, ukuthoba kunye nesigxina sezwi, ukumomotheka, ububele kunye nokuhamba kakuhle.
Yiba ngumntu onomtsalane, kodwa ungacwangcisi umfanekiso wesantombazana encinci. Ukudlala ngothando kunye nokuvuleka kokunxibelelana kwenza umntu odibanisa naye.
Ukwehla, uhlale usetyhini
Abanikazi beenwele ezinde baba neenzuzo ngaphezu kwamantombazana abo - phakathi kwezinye izinto, ufumana amaqhinga amancinci amancinci: khuphela umunwe ngomunwe, flip izinwele zakho kude. Ngokuqinisekileyo, iinwele ziye zahlala zidibaniswa nobufazi.
Zama ukugqoka iingubo kunye neengubo - ezi zizinto eziphathekayo zezingubo zowesifazana, ngoko kutheni unqwenela ukuba ngumfazi kunye nomqokeleli weembono zabantu? Ukuba ukhethe ukuba ngumfazi-zama ukuba ngale ndlela ekupheleni: ungatsho ukungcola, ungafungi nje nge-shoemaker, ungaphuzi "iziphuzo" ​​zabantu: ubhiya, i-vodka.
Hlala wendalo uze uzixabise
Ukuzama ukuba ngumfazi kunye nentlonelo yento enye akwanele, kufuneka ukhohlise rhoqo, usetyenziswe kulo mfanekiso! Ngokwemvelo, utshintsho oluvela kwi "mole" enomoya weNkonzo yeNkonzo "ayiyi kudlula ingqalelo yakho, lungele ulungele, kodwa" umdlalo ufanelekile ikhandlela. " Ungakhohlwa ukuba ngokukhohlisa indoda, kufuneka uqhubeke uhlala umhle, unomdla kwaye unqwenela lonke ixesha, ngaphandle koko awukwazi ukugcina, kungakhathaliseki ukuba uzama kangakanani.
Hlalani uhloniphekile kwaye wazi ngokwakho intlawulo, ngokuqinisekileyo amadoda anike ingqalelo kwintombazana enengqondo yokuzixabisa, zenzele ngokwaneleyo. Makuvumele loo mntu avulele umnyango kuwe, ahlawule kuwe kwindawo yokutyela, akukhangele. Uvakalelwa njengendoda yangempela eceleni kwakhe, makabe ngumntu onobubele.
Okokuqala, ngokuqinisekileyo, ufunde ukuthanda nokuzihlonela, ngoko ke amadoda aya kuvuyela ukunyanga. Zizenzele ngezinto ezintle ezimnandi: uthenge iingubo ezitsha ezimnandi, uzigcobe ngokutya okumnandi, gcoba kwindawo yokuhlambela kunye neetyuwa kunye namafutha. Hlela ngokwakho iintsuku zobuhle: tyelela i-salon, zibeke iinwele zakho kumphathi, vumela ubuso bakho bathathwe ngabaqeqeshi. Phumla uze ufumane ubuthongo obaneleyo, ujabulele ubomi. Ungalokothi ukhohlwe ukuba ufanelwe kuphela okulungileyo.
Ukudlala ngothando kuyindlela enhle yokukhohlisa umntu. Ukudlala ngothando, ungamcebisi nje kuphela, kodwa uphakamise ukuzithembela kwakho, ngoko ke kube yinto ekhangayo nakwezesondo. Amadoda adlala kwaye anithanda "ukudlala ngothando" nabasetyhini. Ukubukeka okungaqhelekanga, ukumamatheka kwintsikelelo, ukuthinteka okungenanto engenamacala - kwaye nantsi ungomdlalo. Ngaphandle ngaphandle kokungaqondakali, kodwa phakathi kwakho sele sele unxibelelwano oluqinileyo. Iingcali zibonisa indlela yokusebenzisa oko kuthiwa "magnetic" jonga: jonga phezu kwegxala lendoda yakho kude, jonga amehlo akhe - ngoko abafundi bakho baya kwandula ukusuka ekugxininiselweni kwento esondeleyo, ngoko uya kufeza umboniso omangalisayo. Ukudlala, ungakhohlwa ukubonisa umdla kumntu, mamele ngokucophelela. Kubantu, kubalulekile ukuba bazive 'bephulaphule' kuye, baphoswe ngamazwi akhe. Ngoko uthembeke naye, indoda ayiyi kukulinda ukuba uhlolisise umdla wakho. Ngamanye amaxesha amadoda athile afana nawo xa umlingo "ephila" amabali akhe kwaye usebenzisa igama lakhe kwisicoco, uthetha ulwimi olufanayo naye. Kodwa musa ukuyiqhayisa! Kwimeko nayiphi na into, makabe ekhululekile kunye nawe, ube "ngowakhe", ngoko umnxibelelwano uqulunqwe kakuhle kwaye ufezekisa indawo yakhe.
Ukuba ufuna ukudukisa umntu-bonise indlela yakho. Khumbula: ukuqala kobudlelwane "umdaniso omhlophe", umntu akaze abe ngowokuqala ukubonisa ikhosi yeziganeko. Ukuze uvumele ukuba akwenze. I-seductress yangempela "iya kuxela" indoda xa isinyathelo esilandelayo singathathwa. Oku kuyintloko yeli nyathelo! Smile kuye, wink, ngobumnene kwaye njengokungathi ngephatha ngephatha isandla sakhe - oku kuya kumchazela ukuba uyamvumela ukuba aqhubeke echaphazela. Ncedise ukuba acinge ukuba unqwenela iinqwenela zakho, amadoda akulula ukuhlangabezana nemigqomo yakho.
Iingcebiso ezinikwe apha ziyakunceda ukuba ufunde indima kwaye ube ngumfazi onqwenelekayo kwaye onqwenelekayo, ukuba ube yiphupha lomntu. Qala kunye nawe, utshintshe isimo sakho sengqondo ngokwakho, kwaye uza kubona indlela abantu 'abaza kulujonga ngayo' - ubonakala ubamba umtshini omnye. Ufuna ukukhohlisa - abe nguye.
Indlela yokwenza umntu athande ngayo nawe?
Uthini umahluko phakathi kokudlala ngothando kunye nokutya?
Indlela yokudibana nabafana kwidolophu yakho?
Ungayiqonda njani ukuba umfana ufuna ukukubanga?
Umfazi ohlakaniphile, indoda ehlakaniphile kunye nokulula
Thatha ulawulo lwekhumba elinamafutha
Izinzuzo zokuGaya ukutya
Ukunciphisa isisindo sokutya: ubisi lwebhanana
Iklabishi ishicilelwe ngeebhere
Umthi weKrisimesi woNyaka omtsha. Ukufakelwa okanye yokuphila?
Umntwana uthetha ephupheni
Umfanekiso wekliniki we-opiate yetyhefu
Ukuchaneka njani ukusebenzisa i-blush?